Eco Enyi na Enyi Products Manufacturers - China Eco Friendly Products Factory & Suppliers
Ihe eji ere ihe oriri
Shanghai COPAK hiwere na 2010. Ma anyị isi na ngwaahịa ndị PET iko, PET karama na PET nri akpa. E wezụga na anyị mepụtara PLA ngwaahịa. Ma ugbu a, ụbọchị, Eco friendly ngwaahịa na-ukwuu chọrọ iji kpuchido gburugburu ebe obibi. Ya merebiodegradable nri akpa anyị na-eweta. Akwụkwọ efere Kraft, arịa nri nwere ike ire ere sitere na shuga shuga ma ọ bụ starch ọka na wdg.
Keywords ngwaahịa Bowl Salad Bowl; Akwụkwọ efere Kraft; nnukwu efere akwụkwọ Salad;
Njirimara Uwe mkpuchi PE; mkpuchi PLA; Aluminom foil akwụkwọ nnukwu efere
Dị ECO-Enyi na Enyi
Mbipụta Matt Lamination / embossing / Kenkowaputa Lamination / gold foil
Oge Mbuga ozi 15-25ụbọchị
Ngwakọta ngwongwo 50pcs / akpa, 10bag / ctn
Port Mbupu Shanghai, Ningbo
Kwụ Tergwọ Okwu 30% T / T na mbu, itule megide BL oyiri.
Omenala akwụkwọ eji enyo
Omenala akwụkwọ eji enyo sitere na mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ mkpuchi PE / PLA / aluminom. Enwere ike ịhazi ọkwá akwụkwọ Copak n'ọtụtụ nha, mpịakọta, ụdị, agba na mbipụta logo. Emere efere akwụkwọ omenala maka ịdebe Osikapa, Noodles, Mkpụrụ osisi Dessert, Yogọt, Friza, Portion, ncha nke ncha, nri ọkụ na wdg.
Omenala e biri ebi PLA iko
Nkwado COPAK omenala biri ebi PLA iko.Ndị ahịa nwere ike omenala ha iko na shapes, agba, mpịakọta, logo e biri ebi na ndị ọzọ na nkọwa. COPAK nwere ahụmahụ injinia, ebu na-emepe emepe igwe, ọkà ọrụ na UV-ihuenyo ebi akwụkwọ igwe. Ihe niile ị chọrọ ga-eju afọ na COPAK.
Akwụkwọ efere Kraft. A na - akpọkwa ya dị ka nnukwu efere a na-ekpofu ekpofu, nnukwu efere akwụkwọ ma ọ bụ nke na-ekpofu nri. A na-ejikarị ya eme dị ka ọdịdị gburugburu na COPAK kraft akwụkwọ nnukwu efere dị mma maka ofe, stews, pasta, salads, sie ọka, yana maka ice cream, akụ, mkpụrụ osisi a mịrị amị na ngwaahịa ndị ọzọ. Ifriizi na-eguzogide ọgwụ na-adịghị nkwarụ. Enwere ike itinye mbipụta akara.
Akwụkwọ efere, akpọkwara dị ka Biodegradable Eco friendly nri akpa, kraft nnukwu efere akwụkwọ, salad akwụkwọ nnukwu efere, e mere iji mechie udi na akwụkwọ ihe onwunwe. Ihe ndị a dị mma maka ofe, stews, pasta, salads, sie ọka, yana maka ice cream, akụ, mkpụrụ osisi a mịrị amị na ngwaahịa ndị ọzọ. Ifriizi na-eguzogide ọgwụ na-adịghị nkwarụ. Ndị a nwere ike iwepụakwukwo ọkwá nwere ike ijide nri sitere na anụ na veggies na sauces. Anyị na-enye ọkwá n'ọtụtụ nha iji jikwaa ihe niile site na nri n'akụkụ ruo n'ọnụ ụzọ buru ibu.
Efere akwụkwọ na lids
Compostable akwụkwọ Bowls na lids - 100% Biodegradable. Efere akwụkwọ Shanghai COPAK bụ nhọrọ nwere oke na nha dị iche iche. E ji ọkwa Kraft ma ọ bụ akwụkwọ ọcha mee efere anyị. Ha abụọ nwere ike itinye na PE / PLA / Aluminom mkpuchi. N'izo aka na mkpuchi, ị nwere ike ịhọrọ mkpuchi akwụkwọ, mkpuchi pp, mkpuchi OPS ma ọ bụ mkpuchi PET.
E wezụga PET mmanya, iko nri na karama ihe ọ juiceụ Pụ PET, COPAK bụkwa ọkachamara na Compostable PLA karama. Anyị nwere ike chepụta, ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ, ngwaahịa nkịtị na azụmaahịa mba ụwaPA karama na nkà ahụmahụ. Anyị mmepụta amalite site mwube ngwaahịa imewe, ebu Ndinam, igbu ịkpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi, obibi, labeling nhazi na juru n'ọnụ na Mbupu. PLA okpu makaPA karama nwekwara nhọrọ dị iche iche.
Ofe Akwụkwọ Bowl
Na COPAK, efere akwụkwọ anyị nwere ọtụtụ nhọrọ na nha, mpịakọta na ojiji. Ha bụ microwavable, ihihi-àmà na griiz eguzogide. COPAK’s akwụkwọ ọkwá nwere otu Pee mkpuchi, abụọ Pee mkpuchi, PLA mkpuchi nke na-acha ọcha na agba, Kraft agba, aluminum foil akwụkwọ nnukwu efere na ripple mgbidi akwụkwọ ọkwá.
Efere akwụkwọ ndị a dị mma maka salad, ofe, akwukwo nri, mkpụrụ osisi na ụdị nri ndị ọzọ dị mma maka ịkwakọ ụdị nri dị ọkụ ma ọ bụ oyi. Maka nkọwa nke efere Salad anyị naofe akwụkwọ nnukwu efere dị ka ndị na-esonụ,
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, nke e guzobere na 2010, na ụlọ ọrụ ahịa na Shanghai na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Zhejiang. E guzobere COPAK nke mbụ dị ka onye na-ebu akpa rọba na ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa. Na 2015, anyị malitere azụmahịa nke PET iko na PET karama. N'oge a, ngwaahịa ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-adọrọ uche ndị mmadụ. Copak jiri ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ gburugburu ebe obibi, dịka RPET na PLA. Ugbu a COPAK dịkwaPLA karama emeputa na PLA iko emeputa.
Shanghai COPAK Industry CO., LTD nke dabeere na Shanghai, China, bụ ụlọ ọrụ ọkachamara maka nchịkọta nri dịka iko mmanya, karama ihe ọ juiceụ juiceụ, akpa nri, igbe salad nke PET na ihe PLA.
Na-ezo aka na ngwaahịa COPAK nke PLA sitere na bagasse okpete, ọka. Ngwaahịa anyị PLA gụnyereIko PLA, PLA ihe nri, PLA karama. Ha na-ọtụtụ-eji site na ụlọ ahịa, ngwa ngwa yinye shop, Ogwe, ihe ọ juiceụ juiceụ ụlọ ahịa na na maka mbukota oyi ọ drinksụ drinksụ dị ka ihe ọveraụ ,ụ, ihe ọ juiceụ juiceụ, smoothies, mmiri ara ehi, tii, kọfị, ice ude na na.